Ubunzulu obunzulu, indawo ye-bathyal | Ngeentlanzi
Ukuqala emaphethelweni eshalofini yelizwekazi, kunokuthiwa kungena kwi ubunzulu obukhulu, ebonakaliswa kukungabikho kokukhanya. Yi indawo ye-bathyal, Okubandakanya ithambeka lelizwekazi, lilandelwa yithafa elinommandla ongaphezulu kweemitha ezingama-3.000, kunye nommandla wehadal, oqhelekileyo kwimisele yaseMariana.
Ezi ndawo zinzulu zine ihlwempu yolwandle ichthyofauna ngenxa yokunqongophala kokutya, uxinzelelo lweoksijini oluphantsi, uxinzelelo oluphezulu kakhulu kunye nobushushu obuphantsi kakhulu rhoqo.
KwiMeditera, ukwehla kuyaphawuleka ngakumbi, ngaphaya kwe-1000 yeemitha zobunzulu kukhankanywe kuphela iintlobo ezingama-36 zeentlanzi. Ubungqongqo obugqithisileyo bezinto ezisingqongileyo benziwa mandundu kolu lwandle bubunzulu obunzulu beStrait yaseGibraltar, ethintela ukudlula kweentlobo ezinzulu ezivela kwiAtlantic.
Las iintlobo ze-mesopelagic kunye ne-bathypelagic, phakathi kwe-200 kunye ne-1000 m, babonisa iimilo ezingaqhelekanga okanye ezingafaniyo eziphambuka kakhulu kwinto efanelekileyo yokuqonda intlanzi. Umzekelo olungileyo wale morphology inqabileyo yile intlanzi yezembe. Uninzi lweentlanzi kwezi nzulu zinikwe ukukhanya kunye neefotophores, ezinokuthi zisebenze zombini ukuze zaziwe ngokwangaphakathi kunye nokutsala amaxhoba.
Ngokubanzi, zincinci ngobukhulu. Kukho, nangona kunjalo, okwahlukileyo okhethekileyo, umzekelo, 'Ingxelo: regalecus glesne'inokufikelela kwaye idlule nakwiimitha ezintathu ubude. Iintsapho eziqhelekileyo ze-mesoplegic, phakathi kwabanye, zi yam, i scrawny, i ii-gonostomatids, i ubukhali kunye izipho.
Uninzi lwezi ntlanzi lubonisa ukufuduka okuthe nkqo, kwaye hamba ebusuku uye kumanqanaba epipelagic. Abanye benyuka ukuya kwi-1000 yeemitha ebusuku, ukufuduka ebusuku ngokuma phakathi kwe-300 kunye ne-700 yeemitha kuqhelekile kwii-mytophids ezininzi.
Las iintlobo ze-betonic yale ndawo ihlala ibekwe ngaphezulu kwe-1000 m yobunzulu. Phakathi kwe-2.000 kunye ne-3.000 m ubunzulu, inani elipheleleyo leentlobo zincitshisiwe lasixhenxe kuphela kwiMeditera.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Ubunzulu obukhulu, indawo ye-bathyal